अविरल वर्षाः ५१ जनाभन्दा बढीको मृत्यु, कहाँ के भयो? - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
अविरल वर्षाः ५१ जनाभन्दा बढीको मृत्यु, कहाँ के भयो?
सौजन्यः नरेन्द्र श्रेष्ठ
अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी, पहिरो र डुबानका परी हालसम्म कम्तिमा ५१ जनाको मृत्यु भइसकेको र दर्जन बढी व्यक्ति बेपत्ता रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढी पहिरोमा परी घाइते हुनेहरु कम्तिमा १६ रहेका छन्। वर्षाका कारण विभिन्न ठाउँबाट स्थानीय विस्थापित भएका छन् भने हजारौं घर डुबानमा परेका छन्।
आजपनि भारी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको भनाइ
जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आइतबार पनि भारी वर्षा हुने जनाएको छ। महाशाखाले आइतबार साँझसम्म पूर्वी क्षेत्रको मौसममा सुधार हुन सक्ने भएपनि पश्चिम तथा मध्य क्षेत्रमा सोमबार साँझदेखि मात्र मौसममा सुधार आउने जनाएको हो। मनसुनी न्यूनचापीय रेखा अहिले पहाडी क्षेत्र नजिक आएका कारण भारी वर्षा भएको हो।
बाढीका कारण महोत्तरीका ४२ मध्ये ४१ सडक अवरुद्ध
बाढीका कारण महोत्तरी जिल्लाका दुई मुख्य पक्की र ४० वटा ग्रामीण सडकसहित ४२ मध्ये ४१ सडक अवरुद्ध भएका छन्। जिल्लाको जलेश्वर बर्दिवास सडकखण्ड बाहेक अन्य सबै सडक अवरुद्ध छन्।
महोत्तरीका २ गाविसका १७ परिवार बाढीका कारण विस्थापित भएका छन्। यस्तै, जिल्लाको सम्सी गाउँपालिका—४ गैंढाभेटपुरका १२ घर मुसहर र दुसाध विस्थापित भएका छन्। स्थानीयवासीले १२ जनालाई माध्यमिक विद्यालयमा अस्थायी बास दिलाएका छन्।
अविरल वर्षाका कारण पानी निकास हुन नसकेपछि जनकपुर जलमग्न भएको छ। जनपुर अञ्चल अस्पतालमा दुई फिटभन्दा बढी पानी जमेको छ। रासस र हुलाक कार्यालयका कोठामा पानी पसेर महत्वपूर्ण कागजात भिजेका छन्। सफाइ नगरेका कारण नालाको पानीले पनि जनकपुर दुर्ग्न्धित बनेको छ। रासस, हुलाक, आन्तरिक राजस्व, परिवार नियोजन, महिला विकास, कोष तथा लेखा नियन्त्रण, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, अञ्चल प्रहरी कार्यालय, प्रजिअको कार्यालय परिसर डुबानमा परेका छन्।
पूर्व—पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
अविरल वर्षाका कारण पूर्व—पश्चिम राजमार्गका विभिन्न ठाउँ कटानमा परेपछि राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ। वर्षाले सुन्दरहरैंचा नगरपालिका—४ स्थित बुढी खोलामा आएको बाढीले पुल कटान गरेपछि राजमार्ग अवरुद्ध भएको हो। बाढीका कारण पुल नै जोखिममा परेपछि आवतजावत बन्द गरिएको हो।
वर्षाका कारण जाजरकोटका खोलानाला बढेपछि दर्जनबढी टाउँमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएको छ। विद्युतका लागि निर्माण गरिएको पानीको नहरसमेत भत्किएको छ। नलगाड नगरपालिका—३ करुवास्थित भेरीखोला चिलिखोलेसा लघु जलविद्युत योजनाको नहर बाढीले बगाएपछि विद्युत आपूर्ति ठप्प भएको हो।
यस्तै, कुशे गाउँपालिका—२ मा रहेको खाराखोला जलविद्युत आयोजना पनि अवरुद्ध भएको छ। भारी वर्षाका कारण आएको बाढीका कारण भएको विद्युत आपूर्ति बन्दले जाजरकोट अन्धकार बनेको छ।
माडीका बस्ती पनि डुबानमा
भारी वर्षाका कारण चितवनको माडी नगरपालिकाका दक्षिणी भु–भाग डुबानमा परेका छन्। जिल्लाको ठाडा खोला र रिउ नदीमा आएको बाढीका कारण माडीको वनकट्ठा, अमिलिया, सिमरा, धोवाह, रतनीका बस्ती डुबानमा परेका हुन्।
बाढीले ४० घरलाई पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ भने २०० जति घरमा आंशिक रुपमा क्षति पुगेको छ। बाढीका कारण विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि माडीमा फोनसेवापनि अवरुद्ध भएको छ।
नवलपरासीमा राजमार्ग भत्किँदा यातायात ठप्प
पूर्वपश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका—४ स्थित दाउन्ने उकालोमा सडक भत्किएपछि यातायात अवरुद्ध भएको छ। शुक्रबार रातीदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण दाउन्नेको एस मोडबाट पूर्वतर्फ हाइवेको एक साइड बाटो भत्किएपछि शुक्रबार रातीदेखि नै यातायात अवरुद्ध भएको हो।
अविरलको वर्षाले परासीका हजारौं घर डुबानमा परेका छन्। जिल्लाको झरही, तुरिया, खजुरा, पानभार लगायत खोलाको बाँध फुटेर बाढी गाउँ बसेपछि थुप्रै टोल डुबानमा परेका हुन्।
कञ्चनपुरमा नदीमा बग्दै गरेका दुईको उद्धार
कञ्चनपुरको वनहरा नदीमा बग्दै गरेका दुईजनाको उद्धार गरिएको छ। कृष्णपुर नगरपालिका—१ दोमिल्लाका अन्दाजी ३० वर्षीय केशव महरा र उनका दाजु ३५ वर्षिय धर्म बाढी आएको नदी तर्ने क्रममा बगेपछि स्थानीयले उद्धार गरेका हुन्।
ललितपुरको हात्तीवन क्षेत्रका ५० बढी घर डुबानमा
ललितपुरको कर्मनासा खोलामा आएको बाढीका कारण हात्तिवन क्षेत्रका ५० भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्।
सिन्धुलीमा एकै परिवारका ४ को मृत्यु
शुक्रबार बिहानैदेखिको अविरल वर्षाका कारण आएको पहिरोमा पुरिएर सिन्धुलीका एकै परिवारका ४ जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सिन्धुलीमाढी २ का उदयबहादुर खड्काकी ३७ वर्षीया श्रीमती दुर्गाकुमारी, १५ वर्षीया छोरी शोभा तथा १० वर्षिय छोरा अनिश र ८ वर्षिय छोरा मनिष रहेका छन्।
सिन्धुलीमाढीमा ज्याला मजदुरी गर्ने खड्काको परिवार नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुलीको जग्गामा घर बनाएर बसेको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको आवासीय भवन नजिकबाट झरेको पहिरोले पुरिएर उनीहरुको मृत्यु भएको हो। उदय भने भागेर बाँच्न सफल भए।
पाँचथरको फालेलुङमा पहिरोमा परी ४ को मृत्यु
जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिका—३ मा नेवा खोलामा आएको बढीसंगै पहिरोले बगाएर तीनजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा विष्णु राई, उनकी छोरी सुस्मिता र नातिनी प्रथा रहेका छन्।
पावर हाउसको कुरुवा बसिरहेका उनीहरुलाई पहिरोले पुरेको थियो। उनीहरुको शव हालसम्म पहिरोबाट निकाल्न सकिएको छैन।
रौतहटमा बाढीले जीप बगाउँदा गर्भवती महिलासहित ६ को मृत्यु
रौतहटमा बाढीले जिप बगाउँदा सुत्केरी गराउन लगिएकी एक गर्भवती महिलासहित ६ जनाको मृत्यु भएको छ। परोहा गाउँपालिका—३ की सर्मिला यादवलाई सुत्केरी व्यथा लागेपछि जिल्लाको लौकाहाबाट राजपुर अस्पतालतर्फ जाँदै गरेको जीप राजपुर गाउँपालिका—३ मा बाढीले बगाएको थियो। मृत्यु हुनेहरुमा सर्मिला यादवसहित उनका श्रीमान ३२ वर्षीय चन्दन यादव, आमा सुमित्रादेवी, भाउजु ललिता देवी, भतिजा सरोज यादव र छोरी छोटु यादवको मृत्यु भएको हो।
पहिरोले पुरिएर मकवानपुरमा एकै परिवारका ६ को मृत्यु, कैलालीमा खोलाले बालिका बगायो
मकवानपुरको पूर्वी भागमा पर्ने बकैया गाउँपालिका–१० मन्थलीमा आइतबार वर्षासंगै आएको पहिरोमा पुरिएर एकै परिवारका ६ जनाको मृत्यु भएको छ।
यसैगरी, कैलालीको टीकापुरमा खोलाले बगाउँदा शनिबार एक सात वर्षीया बालिकाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा टीकापुर नगरपालिका—९ का लाजुराम चौधरीकी छोरी सिर्जना चौधरी रहेकी छन्।
सुर्खेतमा पहिरोले पुरिएर एकै परिवारका तीनको मृत्यु
सुर्खेत गुर्भाकोट नगरपालिकामा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ८३ वर्षिय गुमानसिंह बुढा, १४ वर्षीय विक्रम र १२ वर्षीय सरन रहेका छन्। यसैगरी पहिरोमा पुरिएर वर्ष ५५ की दुरपति बुढा घाइते भएकी छन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर ६ स्थित सिन्दुरखोलामा आएको बाढीका कारण बिहान ५ बजे पहिरो जाँदा उनीहरुको मृत्यु भएको हो।
गण्डक नहरमा पानी बन्द गरियो
नवलपरासीको गण्डक नहर भासिन सक्ने खतरा बढेको भन्दै नहरमा पानी बन्द गरिएको छ। जिल्लाको सुरजपुराको एक किलोमिटर उत्तरतर्फ ४२ आरडीमा नहर भासिन लागेपछि आइतबार बिहानदेखि पानी बन्द गरिएको हो। पानी बन्द भएका कारण सुरजपुरामा रहेको १५ मेगावाट क्षमताको गण्डक जलविद्युत गृह ठप्प बनेको छ।
सौराहामा बाढी पस्यो, पर्यटकको बिचल्ली
चितवनको सौराहामा राप्ती र बुढीराप्तीको बाढी पसेपछि अधिकांस होटल डुबानमा परेका छन्। शनिबार रातीबाटै अधिकांश होटल र रेष्टुरेन्टहरु डुबानमा परेका छन्। कतिपय होटलका तलानै डुबानमा परेका छन्। डुबानका कारण पर्यटकहरु आतंकित बनेका छन्। यसैगरी चित्रसारी पुल नजिकै रहेको प्रहरी चौकीसमेत डुबानमा परेको छ। होटलको पहिलो तलामा बसेका पर्यटकहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ।
इटहरीमा सात जनाको शव भेटियो
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा बाढीमा परेर मृत्यु भएका सातजनाको शव भेटिएको छ। उनीहरुको शव पानीमा डुबेको अवस्थामा भेटिएको थियो। मृत्यु हुनेमा भोजपुर घर भई हाल इटहरी—४ गौरीगाउँ बस्ने माया राईका एक छोरा र एक छोरी, आइतबारे बस्ने वर्ष ४० का इश्वर सुनुवार, गौरीगाउँ बस्ने माला शाह, उनकी १० वर्षीया छोरी सिटी, अन्दाजी ७५ वर्षीय एक बृद्ध र अन्दाजी ३५ वर्षकी महिलाको शव भेटिएको हो।
बाढीका कारण इटहरीस्थित नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना मुख्यालयसमेत डुवानमा परेको छ।
रौतहटको एकै घरमा २०० जनाको भर
रौतहटको देवही–८ मा बाढीका कारण एकै घरमा दुईसय भन्दा बढी सर्वसाधारण अड्किएका छन्। पानीको सतह पाँच फिटसम्म बढेकाले उनीहरु तीनतले घरको शरण लिन बाध्य भएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले उनीहरुको उद्धारको प्रयास भइरहेको जनाएको छ।
बर्दियामा बबई पस्यो, १४६ घर विस्थापित
बर्दियाको बबई नदी बालापुर हुँदै बस्ती पसेपछि सदरमुकाम गुलरिया उच्च जोखिममा परेको छ। नदीको सतह बढ्ने क्रमसंगै बारबर्दिया, ठाकुरबा र बाँसगढीका १ सय ४६ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् भने १२ घरमा क्षति पुगेको छ।
बाढीबाट सप्तरीमा अहिलेसम्म १ हजार परिवार बिस्थापित
चार दिनको अविरल वर्षाले सप्तरीका १० हजार घर डुबानमा परिसकेका छन्। डुबानमा परेकामध्ये १ हजार परिवार बिस्थापित भइसकेका छन्। हनुमाननगर कंकालनी नगरपालिका—१ देखि १४ नम्बर वडासम्म जिल्लाको पोर्ताहा, भारदह, मधुवापुर, बेरवा, सकरदही, जोगीनीयाँ, हनुमाननगर र सप्तरीकै विकट मानिने कोशी टप्पुमा अवस्थित गोवरगाढाकमो वस्ती पूर्ण रुपमा जलमग्न भएको छ।
यस्तै, सोहि नगरपालिका को २ नम्वर वडास्थित सकरदही र भारदहको बीचमा रहेको पश्चिमी नहरमा पानी निकासी बन्द हुँदा सैयौँ घर डुबानमा परेका छन्। बलान खोलामा आएको बाढीका कारण डाकनेश्वरी, बोदेवरसाइन नगरपालिकाका अधिकांश गाउँ डुबानमा परेका छन्।
यसैगरी, कोशी र खाँडो नदीमा आएको अत्याधिक बाढीका कारण जिल्लाको दक्षिणी भेगका देउरी भरुवा, तोपा, कजोली, लोनीया, सकरपुरा, रम्पुरा मलहनीया, इनरुवा र तिलाठी गाउँ पूर्ण रुपमा डुबानमा परेका छन्। त्यहाँका स्थानीय चौपाया लिएर सडकमा आएका छन्, उनीहरु खुला आकासमुनि पानीमा भिजेर बसिरहेका छन्।
यस्तै, राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण रुपमा जलमग्न भएको छ। बाढीका कारण विद्युत र नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको छ।
विराटनगरको एयरपोर्ट नै जलमग्न
शुक्रबार रातीदेखिको भारी वर्षाका कारण विराटनगर विमानस्थल नै डुबानमा परेको छ। धावनमार्ग नै डुवानमा परेपछि शनिबार बिहानैदेखि विमानस्थल ठप्प रहेको छ। विमानस्थलमा जहाजसमेत डुबानमा परेको छ। स्थानीय जानकारले विराटनगरमा ०४५ सालपछिकै ठूलो वर्षा भएको बताएका छन्।
वर्षाका कारण विमानस्थलको आवागमन ठप्प बनेको छ भने डुबानका कारण एक्सरे मसिनलगायत अत्यावश्यक उपकरण भिजेका छन्। महानगरका बरगाछी, कञ्चनबारी, सरौचिया, हिमालय रोड, बिजुली अफिस क्षेत्र डुबानमा परेका छन्। सडकनै जलमग्न भएकाले सवारी आवागमन ठप्प छ। महानगरका अधिकांस भित्री राजमार्ग डुबानमा परेका छन्। वर्षाका कारण एयरपोर्ट्स्थित वर्षामापन केन्द्र नै डुबेका कारण कहाँ कति पानी परिरहेको छ भनेर मापन नै गर्न सकिएको छैन।
हालसम्म अविरल वर्षाका कारण मोरङका १५ सय घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सार्ने काम भइरहेको छ।
यस्तै, मोरङको रतुवा र बक्राहा खोलाको बाँध फुटेर रतुवामाइ नगरपालिकाका ५,७,८ र ९ नम्बर वडामा बाढी पसेको छ। बाढी गाउँ पसेपछि त्यहाँका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सार्ने काम भइरहेको छ।
प्रकाशित २९ साउन २०७४, आइतबार | 2017-08-13 12:25:13